असार २२ गते मगंलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल – Khula kura
असार २२ गते मगंलबार तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको समय रहेकोछ । नजिकका आफन्तजनहरु बिचको स’म्ब’न्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । संचित रकम खर्चगर्नुपर्ने सम्भाबना रहेकोछ । वाणीका कारण सामान्य बा’दविवा’दको झमेलामा फ’स्ने सम्भाबना रहेकोछ ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) परीवारका सदस्यहरुबाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष सजग रहनुहोला । आर्थीक झमेलाले सताउनेछ । यात्रामा सामान्य त’ना’व उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्य क्षेत्रमा उत्पन्न तनाबका कारण सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसि’एला ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । रचनात्मक कला तथा कौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आय आर्जनका क्षेत्रमा मित्रजनहरुको साथसहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहेनछ । बौधिक ब्यत्तित्वहरुको अनुशरण दिर्घ’कालिन फाईदाका श्रोत बन्नेछन ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, ट) सामान्यकार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु परेतापनि कार्य सम्पादनको उत्तम श्रेय प्राप्त रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनहरुको साथसहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । सभासम्मेलनमा सरिकहुने अवसर प्राप्त रहनेछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बि’ग्र’न लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । मान्यजनहरुको मार्गदर्शन निकै फाईदा जनक हुनेछ । गै’र ब्यतिहरु द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय तपाईले सहजता पूर्वक प्राप्त गर्नाले मन प्रशन्न रहेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) पारिवारीक स’म्ब’न्धमा सामान्य झमेला उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । साजेदारीमा नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्नेसम्भाबना रहेकोछ । आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगमा अधिक समय ब्यतित रहनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) प्रतिश्पदा जन्यकार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । मित्रजनरुको प्रशन्नताका निम्ती समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा भने सामान्य सम’स्या देखा पर्नेछ । शुभचि’न्तकहरुको साथसहयोगमा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । नयाँ कार्यका निम्ती नयाँ अवसरहरु प्राप्त रहनेछन ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) बौधिक तथा बिशिष्ट ब्यत्तीहरुको रायसल्लाहाले नयाँकार्यको प्रारम्भहुन सक्ने योग रहेकोछ । पूराना मित्रजनरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । तपाईको क्षमताको उचित मु’ल्याङ्कन हुने समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनका माध्यमबाटँ आम्दानिका निम्ती दिर्घकालिन श्रोतहरु फेला पर्नेछन ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) प्रतिश्पर्दीहरु कमजोर रहनाले तपाइलाइ कार्य क्षेत्र सहज बन्नेछ । जटिल कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ । तपाइ सगँ रुष्ट आफन्तजनहरु सहजै नजिक हुन खोज्नेछन । मित्रहरुको साथ सहयोग बाँट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
याैन सम्पर्क गर्ने केटा-केटि कस्ले बढि रुचाउँछन् ? जान्नुहाेस्